Ugbo osisi agave: ọgwụ ọgwụ nke osisi - N'ime ụlọ osisi - 2019
Agave Ezinụlọ: Njirimara ọgwụ
Agave bụ ahịhịa ndụ, nke na-agbasi ike. Akwukwo agave na-acha uhie uhie, anụ, oke, arched na curved. N'akụkụ nke epupụta e nwere mkpịsị nkọ nke agba aja aja na ogologo nke 20-30 mm. N'ụlọ na osisi ahụ, na South America, ogologo akwụkwọ nwere ike ruo 3 m. Agave nwere ihe bara uru bara uru, nke anyị ga-akọwa mgbe e mesịrị. A na-etolite ụdị agave dị iche iche na ụlọ, nke nwere rosette dayameta ruo 50 cm na akwukwo ogologo ruo 15 cm. A ga-eburu n'uche na ihe ngwọta nke agave ụlọ anaghị adị ala karịa osisi ọhịa.
Ị ma? A na-asụ Agave n'ụzọ nkịtị site n'asụsụ Grik dị ka onye dị mma.
Kedu ka agafe bara uru maka ahụ?
Ojiji nke agave, ihe ngwọta nke osisi
Nkwekọrịta na nlekọta
Agave Chemical Composition
Na mgbakwunye na ya mara mma, agave bụ ama n'ihi na ya na-agwọ ọrịa Njirimara. Ihe mejupụtara nke osisi ahụ na-enye ohere ịgwọ ọtụtụ ọrịa na agave, nakwa dị ka ihe enyemaka nke ihe oriri na ụlọ. 100 g nke agave epupụta nwere uru ike nke 69 kcal, ebe uka a nwere 10 g nke carbohydrates, 7 g nke eriri nri, 0,5 g protein, 0.2 g abụba na 1.2 g nke ash. Agave nwere fructose, sucrose, glucose, starch, calcium, magnesium, phosphorus, potassium, sodium, ọla kọpa, ígwè, selenium, zinc, manganese, amino acids n'ụdị arginine, valine, tryptophan na lysine, yana ọtụtụ vitamin A, B1 , B4, B5, B6, B9, C, K, E, PP.
Ndị na-agwọ ọrịa oge ochie marala uru bara uru nke agave dị ka onye na-emetụ n'ahụ, disinfectant, diuretic, laxative, antipyretic, mgbochi mkpali na atụmanya anya na ahụ mmadụ. Maka nzube ndị a, na-ejikarị akwụkwọ anụ ahụ nke osisi na ihe ọṅụṅụ ya. Site na mkpụrụ osisi agave gwakọta ihe ọṅụṅụ ahụ, kpoo ya ntakịrị ma kpochapụ mmiri mmiri, si otú ahụ na-enweta syrup agave ma ọ bụ nectar, nke nwere ihe dị iche iche iji kpoo ahụ toxins na ụgbụ, na vitamin nke nwere ike ịnweta ike usoro ahụ. Ọhụụ agave ọhụrụ nwere mmetụta dị irè na ọgwụgwọ nke anụ ahụ dị nro, bruises na bruises, n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ ga-ekwe omume ị tufuo eriri na ekpenta. A ga - akọwa ụfọdụ ntụziaka maka iji ọgwụ ọgwụ a akọwa ihe n'okpuru ebe a.
Ọ dị mkpa! Ihe kacha mma na-agwọ ọrịa nwere epupụta nke agave, onye ọgbọ ya karịrị afọ 4.
Site na agave na-aga - osisi nke nwere ọtụtụ ọgwụ, mee ọgwụ decoctions nke tinctures na lotions, bụ ntụziaka nke a maara n'oge emepechabeghị. Ka anyị tụlekwuo otu esi eji agave ụlọ na ụdị ọgwụgwọ ọ nwere.
E gosipụtara iji agave na-eme ihe maka ọrịa ndị na-agba afa na ọrịa hepatic, maka bronchitis, ụkwara nta, na oyi baa,
Ọrịa nke afọ na imeju ga-enyere aka gwọọ 50 g nke ọhụrụ epupụta nke agave, buputa otu iko mmiri esi etinye mmiri, a ghagidegidere ngwakọta a maka awa isii, ihe ndị na-esi na ya pụta wee were 1 tbsp. l ugboro atọ kwa ụbọchị tupu nri.
Njirimara ngwọta nke agave ga-enyere aka imeri ọrịa akwara., n'ihi nke a, ị ga - ejikọta 20 g nke ihe ọṅụṅụ osisi ọhụrụ, 20 g anụ ezi, 100 g nke butter na 100 g mmanụ aṅụ. Were ngwá ọrụ a ga-abụ ụtụtụ na mgbede maka 1 tbsp. l., na-agbakwunye ya na iko nke mmiri ara ehi na-ekpo ọkụ ma ọ bụ tii.
Ọhụrụ agave ihe ọṅụṅụ nwere diuretic na laxative Njirimara.Maka nke a, a na-ejikọta otu tablespoon nke ihe ọṅụṅụ na 100 ml mmiri ma were ya dị mkpa.
Ngwakọta vitamin nke 100 g nke mmanya agave, 100 g nke ihe ọṅụṅụ lemon, 200 g nke mkpụrụ ndụ ukpa na 200 g mmanụ aṅụ ga-enyere aka abawanye. Were ọgwụ a na-atọ ụtọ dịka ọkara otu awa tupu nri ọtụtụ ugboro n'ụbọchị.
Njirimara na-agwọ ọrịa nke osisi agave dị irè n'ịgwọ usoro mbụ nke lupus, nakwa dịka ọ bụrụ na ọrịa mgbagwoju anya. Ọrịa ndị a ga-agwọ ọkpụkpọ mmiri akwukwo ọhụrụ - 20 tụlee kwa 100 ml mmiri.
Agụụ Agave na-eweta abamuru ọ bụla na-eme ka akụkụ ahụ dum nke ụmụ mmadụ na-emepụta, na-eme ka mgbaze dị mma, na-akwalite ịchịisi nke nwere bifidobacteria bara uru na nje bacteria lactic acid, na iwepu oke mmiri n'ahụ.
Site n'enyemaka nke ihe ọṅụṅụ na agave ma ọ bụ mgba nke mgbọrọgwụ nke osisi a, a na-agwọ eze mgbu site n'itinye mmiri ọgwụ na-agwọ ọrịa na goms.
Ọ dị mkpa! Site na ịmalite ọrịa ọrịa akụrụ, amachibidoro ọgwụ ọjọọ site na agave.
E jiriwo akwụkwọ Agave mee ogologo oge iji kpochapụ sciatica na sciatica, n'ihi nke a, ị ga-egwu 200 g osisi pulp ma mee ihe na-esi na ya apụta ebe ị ga-alakpu ụra. Ikekwe ihe na-enwu ọkụ ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, nke na-agabiga awa ole na ole.
Na ọgwụgwọ nke etuto na purulent ọnyá, a na-egbutu akwukwo agave na mpaghara ahụ emetụtara ya na mkpụcha ma dozie ya na bandeeji. A ghaghị ịgbanwe akwụkwọ a ka ọ bụrụ nke a na-ebipụ ọhụrụ, usoro a dị mfe ga-eme ka nhụsịrị ahụ dị ọcha pụọ ​​na ya. Ọ bụrụ na ọ bụ nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma, ọ na-atụ aro ka ị tinye osisi agave na ọkara ya na ebe ọ ga-egbu oge ahụ. Ọ bụrụ na akpụkpọ anụ na ihe ọṅụṅụ na agave, ọ na-atụ aro ka ị kpoo ebe a na-acha ọbara ọbara na ude mmiri.
50 g nke akwukwo osisi agave nke 0,5 l nke vodka tinyere n'oge izu zuru oke na-enyere aka na nhazi nke rheumatism, n'ihi na a ghaghi ime ihe a. A na-eji ọgwụ agave mee ihe iji na-emeso nkwonkwo, a na-ama ọnyá dị njọ tupu ị lakpuo ụra ma jiri ákwà ịcha ahụ woolen kpuchie ya.
Ihe ọṅụṅụ nke agafe ọhụrụ, nke a gwakọtara na mmanụ aṅụ mmiri na nke ruru 1 ruo 10, dị irè n'imeso ọkụ, inflammations, ọnyá na ọbụna purulent mbufụt nke anya. A ga-etinye ihe a mejupụtara na bandeeji ahụ ma gbakwunye ebe ọnya ahụ maka nkeji ole na ole.
Edema, itching and irritation mgbe ahụhụ ma ọ bụ agwọ agwọ nwere ike wepụrụ site na ịcha na agave ihe ọṅụṅụ na mpaghara emetụta.
Ị ma? Agave nwere ike ịmalite naanị otu ugboro, n'ọgwụgwụ nke okooko osisi ahụ anwụọ.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na iji agave eweta uru nye ụmụ mmadụ, osisi a nwekwara ike bụrụ ihe emerụ ma ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe na-ekwesịghị ekwesị. Nkwenye zuru oke maka iji ọgwụ eme ihe na agave bụ ime ime, nsogbu nke hormonal, mmeghachi omume nfụkasị na idiosyncrasy, ọbara ọgbụgba, ọrịa na-akpata ọrịa na ịba ọcha n'anya.
A naghị atụ aro agafe ọgwụgwọ mgbe a na-agụ akwụkwọ, yana ndị inyom na-eme atụmatụ ime ime n'oge na-adịghị anya. Iji gbochie mmeghachi omume ahụ siri ike na osisi a, ị ga-etinye ihe ọṅụṅụ mmiri ole na ole na nkpa aka gị, ọ bụrụ na ịcha ọbara ọbara, itching na ọkụ, ị kwesịrị ịjụ iji ndị mmadụ si agave.
Akwukwo agafe nke oma bu ihe di nma n'ile ya anya, o nwere akwukwo akwukwo ndu di nma nke oma, nke di kwa nma dika ihe ndi ozo enyere gi aka, i ghaghi iwepu onu ogugu ha.
Ụdị pigs na àgwà ha
Begonia Cleopatra - mma kachasị mma nke ụlọ ime ụlọ ma ọ bụ ụlọ
Kedu ahịhịa na-eri nri rabbits?
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Agave Ezinụlọ: Njirimara ọgwụ